ဒင်ဗာမြို့မှစကတ် 2018 - ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာကို, တာရှည်တိုတို, Maxi, ခလုတ်နဲ့ခဲတံနှင့်အတူကောင်းကင်ဘား, High-ခါး, နေရောင်အပြည့်အဝ, ပုံရိပ်?
ဒင်ဗာမြို့မှစကတ် 2018 - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, မော်ဒယ်များနှင့်ဤရာသီ၏ပုံရိပ်များ
လက်တွေ့နှင့်အဆင်ပြေအဝတ်, ဂျင်းရာသီမှတစ်ရာသီကနေတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒင်ဗာမြို့မှစကတ် 2018 နှစ်သိမ့်, functionality နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်သောအရှိဆုံးဣတ္နှင့်ဆွဲဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းမော်ဒယ်တစ်ဦးကမတူကွဲပြားရွေးချယ်ရေးတစ်ဦးချင်းစီစတိုင်အလေးပေးဖို့မဆိုလမ်းအတွက်အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဒင်ဗာမြို့မှစကတ် 2018 - ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ဒီဇိုင်နာများ၏အသစ် collection များကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြည့်စွက်၏ဆက်စပ်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေအဝတ်အစားဒီဇိုင်းအပြီးသတ်ပါပြီ။ တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာရွေးချယ်မှုအတွက်ထုတ်ကုန် စပ်ချုပ်ပညာ technique ကို ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီဇိုင်နာများဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူပေါင်းစပ်, ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထဲမှာဂျင်းထည်, ဒါပေမယ့်လည်းသားရေ, တရားစွဲခြင်းနှင့်ဝါဂွမ်းစုတ်ကိုသာအသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေကြမ်းနှင့်ချုပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်နာများလည်းဆွဲဆောင်မှုကြည့်သောခြားနားသောအရောင်အဆင်းများပေါင်းစပ်နှင့်အတူစမ်းသပ်နေကြသည်။ သို့သော်ရဲ့ဖက်ရှင် 2018 အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးမိုးပြာရောင်အဝတ်ကိုကြည့်ကြကုန်အံ့:
စုတ်ပြဲပုံစံမျိုး။ အကြီးစားသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အပေါက်ရာသီသစ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ မကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောအရှည်နှင့်အနောက်တိုင်း dangling ချည်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့် scuffed တစ်စုတ်ပြဲအစွန်းအတူရေပန်းစားရွေးချယ်မှုပုံစံဖြစ်လာသည်။
ပန်းနှင့်အတူ။ လှပသောအဝတ်ချယ်လှယ်သောဖဲချုပ်ပုံစံများသို့မဟုတ်တစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အတူဣတ္နှင့်ရင်ခုန်စရာကြည့်။ လူကြိုက်များသည့်အကြောင်းအရာများပန်းပန်းပွင့်, တိရိစ္ဆာန်နှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှား, ဇာ motif ဆင်ခြင်၏။
ဇာနှင့်အတူ။ နူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်ခေတ်မီလက်တွေ့ကျတဲ့နေ့စဉ်အဝတ်တစ်ဦးကထိတွေ့နေတဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဇာတိချက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါစပစ္စည်း, အအိတ်ကပ်အပေါ်, နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်စင်တာထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေ INSERT ၏ပနျးပှားကိုမြှ၏အစွန်းကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပုလဲ။ ဣတ္နှင့်ကြော့မဆိုပုံရိပ်စေမည်ဟုဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်များ, ကအသေးစားနှင့်အကြီးစားနှစ်ခုလုံးကိုပုလဲပုတီး၏ပုံစံမျိုးစဉ်းစားသည်။ ပုလဲအိတ်ကပ်၏အစွန်းတစ်လျှောက်တွင်, ဥပမာ, တစ်ခုလုံးအရှည်ကျော်သို့မဟုတ်တစ်တိကျသောဧရိယာအတွင်းအဝတ်စကေးကိုအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒင်ဗာမြို့မှစကတ် Maxi 2018
ရှည်လျားသောသစ်ကို collection များကိုဖြတ်စတိုင်များခြေကျင်းမှနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နွားသငယ်အနေဖြင့်အနားမှပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ ယခုနှစ်တွင်လုံးဝခြေမကိုဖုံးသောအများဆုံးအရှည်, သက်ဆိုင်ရာမရှိတော့ပါ။ ပုံရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့ကြော့ရှင်း 2018 ခုနှစ် pleats နှင့်အတူအရှည်ဂျင်းစကတ် add ကူညီပေးပါမည်။ ပူနွေးသောရာသီများတွင်ထွက်ရှိသောခါးမှာဆနျ့ကငျြဘခါးပတ်သို့မဟုတ်ပဝါကိုအလေးပေးဦးမည်သည့်အနိမ့်-ပစ်လွှတ်ခါးနဲ့စတိုင်ရွေးချယ်မှုမော်ဒယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အထင်ကြီးခြင်းနှင့်ခေတ်မီဖြောင့်ဖြတ်တောက်မှုကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ဒူး၏အနည်းငယ် extension ကိုအတူတစ်နှစ်ခုတ်ဖြတ်။ တစ်ဦးမိုနိုခရုမ်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း gradient ကိုအသွင်ကူးပြောင်းမှုအဖြစ်လမ်းကြောင်းသစ်၌တည်၏။
ဒင်ဗာမြို့မှစကတ် MIDI 2018
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအလယ်အလတ်အရှည်တစ်မော်ဒယ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ စတိုင်များ MIDI အခမဲ့နှင့်ကျယ်ပြန့်ဖြတ်ခုနှစ်နှစ်ဦးစလုံးတင်ဆက်နှင့်ပုံစံများကိုကျဉ်း။ ဒင်ဗာမြို့မှစကတ် 2018 sundress အမျိုးအစားအရသိရသည်ကျယ်ပြန့်ကြိုးအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါသည်။ ဣတ္နှင့်အတူအံ့မခန်းဒီဇိုင်းကိုကြည့် နေတဲ့ High-ပစ်လွှတ်ခါး ။ အလယ်အလတ်အရှည်စတိုင်များအဘို့အပြီးနှင့်အလှဆင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့သောအဝတ်အစားသင်စတိုင်လေးနဲ့နွေရာသီနှင့်အအေးရာသီအတွက်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်ကြောင့်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အလင်းနှစ်ဦးစလုံးအထည်ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အနား MIDI လိုင်းကြောင်းသဏ္ဌာန်မဆိုအသက်အရွယ်နှင့်အမျိုးအစားများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ပါသည်, ဒူးအောက်တွင်မှနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နွားသငယ်ကိုမှနေကြပါတယ်။
လှီးဖြတ်ဖြတ်တောက်အမြဲသဟဇာတနှင့် sexy ပုံကိုအလေးပေး။ သို့သော်ဒီဇိုင်နာများ၏သစ်ကို collection များကိုလုံးဝအပိုတိုအရှည်ပုံစံဖယ်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်လယ်ပိုင်းပေါင်မှသပ်သပ်ရပ်ရပ်ထုတ်ကုန်နေဆဲဖြစ်သည်။ တော်တော်နှင့်ဣတ္ silhouette အခမဲ့ကောင်းကင်ဘားနှင့်နေရောင်ကိုကြည့်ပါ။ မူရင်းရွေးချယ်မှုအချိုးမညီ pleats နှင့်အတူအံ့မခန်း Tulip ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီ option ကိုပါးလွှာပိန်ခြေထောက်နှင့်အတူသင့်လျော်သောမိန်းကလေးများဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်ဂျင်းစကတ်နွေဦး-နွေရာသီ 2018 ပန်းနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပုလဲခြားနားဆွဲဆောင်မှုစုတ်ပြဲခြင်းနှင့်ညစ်ပုံစံမျိုးနှင့်အတူဖြည့်ဆည်း။
ကောင်းစွာင်း၏ပုံသဏ္ဍာန်ရရှိထားသူတစ်ဦးသိပ်သည်း texture အဖြစ်ဂျင်းထည်ပြုမူသောအမှုအားသာချက်။ ဒီ feature အမြင်အာရုံရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့လိုင်း silhouette ဖန်တီးအချိုးအစား align မှကူညီပေးသည်။ ထို့ကြောင့်, ခေတ်မှီဂျင်းစကတ် 2018 - ကသာလက်တွေ့ကျသောနှင့်စတိုင်အဝတ်အစားမရှိ, ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုသတ်မှတ်ချက်ဘောင်များနှင့်အသက်အရွယ်များအတွက်စွယ်စုံရွေးချယ်မှု။ မျက်နှာသာအရောင်အစီအစဉ်အတွက်စတိုင်လ်၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်အရေးကြီးသောတစ်ခု။ အဆိုပါအရောင်များအမှုသည် image ကိုတစ်တောက်တောက်ဝဲ, ဒါမှမဟုတ်အားလုံးအောင်မြင်စွာဖြည့်စွက်ပေါင်းစပ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအများဆုံးလက်ရှိအတွေးအခေါ်များကိုကြည့်ပါစို့:
Black က။ မော်ဒယ်ဂန္မှောင်မိုက်အရောင်များကိုတင်းကြပ်ခြင်းနှင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းကြည့်ရှုပါ။ ထို့ကြောင့်, ပုံစံမျိုးမရှိဘဲဒီဇိုင်းကိုမဆိုစတိုင်တစ်လောကလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်မူရင်းဗားရှင်းရှာနေလျှင်မူကားတစ်ဦးအရောင်ချွတ်ထားတဲ့လူမည်းအရောင်အဘို့ကိုရပ်တန့်သို့မဟုတ် scuffed ။
ဖြူ၏။ ဂန္ထုတ်ကုန်များ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာကြည့်ပေါ့ပါးရိပ် palette ။ ထိုသို့သောအဝတ်အစားနေ့စဉ်ကြက်သွန်နီနှင့်ထွက်ပေါက်မှအလွတ်သဘောလမ်းများအတွက်အောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အဖြူရောင်မော်ဒယ်အသေးစိတ်၏ကျန်ကောက်ရန်လွယ်ကူသည်။
တောက်ပ။ ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်အဝတ်အစား, ဂျင်းမှတ်မိလွယ်တဲ့မိုနိုခရုမ်ဖြေရှင်းချက်နေဆဲဖြစ်သည်။ အနီ, အဝါ, အစိမ်း, အပြာနှင့်အခြားသူများ - လူကြိုက်အများဆုံးအရောင်များ၏သဘာဝအရိပ်ဖြစ်ကြ၏။
ရိုးရာအရောင်များ။ အဆိုပါစံအပြာအရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီ၏ထုတ်ကုန်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနှစ်သက်ဖွယ်နှင့်မူရင်းခဲ့ကြောင်း, အက်ဆစ်အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့် gradient ကိုအကူးအပြောင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမော်ဒယ်သတိပြုပါ။
ခလုတ်နှင့်အတူ 2018 ဂျင်းစကတ်
ဖက်ရှင်ခေတ်သစ်ဆုံးဖြတ်ချက်မော်ဒယ်များသတ္တုခလုတ်အပေါ်တစ်ဦးအစိုင်အခဲချိတ်ဖြစ်လာသည်။ တောက်ပဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပုံစံမျိုးတစ်ပြိုင်နက်အာရုံကိုဆွဲသည်။ ဒီအားသာချက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့သဘာဝအဖြတ်ကိုဇစ်အများအပြား pugovok အောက်ဆုံး, undo ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။ စတိုင်ဂျင်းစကတ် 2018 ရှေ့နှင့်ဘေးထွက်နှစ်ဦးစလုံးမှာ fittings နှင့်အတူဖြည့်ဆည်း။ ချိတ်ယင်းထောင့်ဖြတ်အပေါ်အချိုးမညီထားရှိနိုင်ပါသည်။ ခလုတ်လုပ်ဆောင်နဲ့သက်သက်သာအလှဆင်အခန်းကဏ္ဍနိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစားဆက်စပ်ပစ္စည်းအသုံးပြုပါ။
ဒါဟာကြော့စတိုင်တိုက်ရိုက်ကြည့် ဂန္စတိုင် ။ ဒီ model မဆိုအမြင့်, ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားနှင့်အသက်အရွယ်မှတစ်လောကလုံးဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်လေးများနှင့်တင်းကြပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတိုင် ensembles အတွက်ဿုံမထိုက်မတန်, အနက်ရောင်အဖြူနှင့်နက်ပြာရောင်အရောင်၏ထုတ်ကုန်များ။ သင်မြို့အဘို့အဝတ်ကောက်လျှင်, စုတ်ပြဲခြင်းနှင့်အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့မော်ဒယ်တွေကိုရှာပါ။ ဖက်ရှင်ဂျင်းစကတ် 2018 ကိုမကြာခဏသဟဇာတ, ကြော့ရှင်း, လိင်၏အဆင်းလှသောမထိုက်မတန်နှင့် accentuation ကိုအထောက်အကူပြုရန်သောထည် spandex ရာခိုင်နှုန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ တင်းကျပ်သောခဲတံအတိုအရှည်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အနား MIDI နှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျဣတ္နှင့်အဆင်ပြေ option ကိုကြည့်ရင်, တက Win-Win စတိုင်တစ်ဦးက-shaped silhouette ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကဒီဇိုင်းကိုတိုတို Mini နှင့် MIDI ရင်ခုန်စရာ, ကြော့ Maxi နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ရေပန်းစားသည်။ စိတ္တဇတွန့်ဖန်တီးဝတ်ဆင်နိုင်သည့်ပါးလွှာပေါ့ပါးသောပစ္စည်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဒင်ဗာမြို့မှစကတ်နွေရာသီ 2018 ။ ချမ်းရာသီအတွက်မော်ဒယ်များကိုပိုမိုသိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာထားရှိမည် trapezoidal ပုံသဏ္ဍာန်။ အမှန်တကယ်ချောကောင်းကင်ဘားက hidden capacious အိတ်ကပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ A-shaped ထုတ်ကုန်မကြာခဏရှေ့ခလုတ်အပေါ်တစ်ဦးဇစ်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းနေကြသည်။ မကြာသေးမှီကခေတ်ရေစီးကြောင်းကျယ်ခါးပတ်တင်းကျပ်စွာနေဖြင့်ဖြည့်ဆည်းနေကြသည်။
ကျယ်ပြန့်ပျံနေတဲ့ဖြတ်ထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားအလှဆုံးနဲ့ရင်ခုန်စရာမော်ဒယ်များ။ စတိုင်နေရောင်အမြဲဣတ္နှင့်တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း image ကိုအလေးပေး။ ဖက်ရှင်ဂျင်းစကတ်နွေရာသီ 2018 အတိုအရှည်တင်ပြကြသည်နှင့်မကြာခဏစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် finish ကိုတို့ကဖြည့်ဆည်းနေကြသည် - ဆနျ့ကငျြဘပန်း, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဇာမြိတ်။ သိပ်သည်းအသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့်ဆောင်းရာသီကာလအဘို့မော်ဒယ်များပေမယ့်ကောင်းမွန်စွာအလေးအနက်ဖော်ပြတဲ့ရင်ခုန်စရာစတိုင်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ။ အထူးသဖြင့်ဣတ္နှင့်ကြော့ကြည့် MIDI ထုတ်ကုန်။ အလယ်အလတ်အရှည်ဟာသွယ်လျခြေထောက်အလေးပေးပေမယ့်တစ်ဦးနှိမ့်ချခြင်းနှင့်သတိပညာရှိများ၏ပုံရိပ်ကို။
သငျသညျဆိုပါက - တစ်သွယ်၏ပိုင်ရှင်နှင့်ယဉ်ပုံပျော်ရွှင်သည်အလွန်အမင်းထုတ်ကုန် silhouette ယင်း၏တန်ရာ၏သငျသညျ accentuation များအတွက်အမှန်တကယ် Boon ဖြစ်လိမ့်မည်ကျဉ်း။ လူကြိုက်အများဆုံးစတိုင်များဒူး-အရှည်ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။ ထိုသို့သောအဝတ်လှပ sexy နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုအလေးအနက် ပြု. , တင်ပါးကိုက်ညီ။ ကျဉ်းမြောင်းသောကာမော်ဒယ်ဂျင်းစကတ် 2018 တိုတိုဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များအတွက်အမြင်အာရုံစံ "hourglass" တွင်မဆိုပုံပြောင်းလဲသောထောင့်ဖြတ်အပေါ်တစ်ဦးဇစ်နှင့်အတူဇစ်အိတ်ကပ်ခြားနားတစ်ခုအမှန်တကယ် finish ကိုဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။
မြင့်မားသောခါးနှင့်အတူ 2018 ဂျင်းစကတ်
မိုးပြာရောင်ပြီးဖက်ရှင်စတိုင်အဝတ်မြင့်ဆင်းသက်ခါးဖြစ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြောင့်ခြင်းနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောမော်ဒယ်များများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ Overvalued ဖြတ်အမြင်အာရုံ ustroynit ခန္ဓာကိုယ်ကကူညီခြင်းနှင့် silhouette ၏ကျေးဇူးတော်စီးသောလိုင်းများကိုအလေးပေးပါလိမ့်မယ်။ အမြင့်ဂျင်းစကတ် 2018 ထဲမှာလမ်းကြောင်းသစ်နဲ့အတိုအရှည်ကိုပေးအပ်သည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဆင်းသက်ပါးလွှာခါးပတ်ခြားနား lacing ကျယ်ပြန့်လွန်း-Basque အဘိဓါန် အသုံးပြု. ဆန်တဲ့နိုင်ပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းကိုမကြာခဏတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအရောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဥပမာ, သားရေသို့မဟုတ်တရားစွဲ၏ဖွဲ့စည်းသည်။
အပြည့်အဝ 2018 ဘို့ဒင်ဗာမြို့မှအဝတ်
ကိန်းဂဏန်းနှင့်အတူအမျိုးသမီး ပေါင်းအရွယ်အစား စတိုင်ထုတ်ကုန်မိုးပြာရောင်သံမဏိအခြေစိုက်စခန်းဒြပ်စင်နေ့စဉ်အဝတ်အစား။ ထိုသို့သောအဝတ်အစားတက်ကြွ wear အဘို့မသာလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းအမြင်အာရုံအချိုးအစားမညီမျှမှုဘောင်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ ဒီများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဣတ္ကောင်းကင်ဘား MIDI ဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဒါကမော်ဒယ်ခါးကိုအလေးအနက် ပြု. နှင့်ပေါင်များအမြောက်အများပုန်းအောင်း, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်မဆိုအမျိုးအစားအဘို့သင့်လျော်သည်။ အဓိကအားနည်းချက်ဟာကျယ်ပြန့်ပခုံးထဲမှာဘော်လျှင်တစ်ဦးအလင်း-ရောင်စုံအဝတ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။ အပိုလက်မတင်ပါးနှင့်ခြေထောက်အတွက်အာရုံစိုက်နေကြသည်ဆိုပါကအမှောင်ထဲမှာထွက်ပစ္စည်းများအပေါ်နေသော် သာ. ကောင်း၏။
အပြည့်အဝပုံအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှမြင့်မားတဲ့ထိုင်ခုံတွေနဲ့ဂျင်းစကတ် 2018 ရာသီဖြစ်လိမ့်မည်။ တင့်တယ် finish ကိုထိထိရောကျရော, အတွေဆီကနေပေါ်လွင်ခါးနှင့်စာရေးတံ ချ. ဝေ silhouette လိုင်းချောမွေ့ပါစေ။ ဒါဟာတာရှည်အဝတ်အတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ၎င်း၏ပြဌာန်းခွင့်နှင့်ထုံးစံလွယ်ကူမှုကိုအလေးအနက်တစ်ဦးတိုတောင်းစတိုင်များရွေးချယ်ဖို့မကြောက်ပါနှင့်။ သို့သော်စပ်ချုပ်ပညာရဲ့အနုပညာအတွက်အဝတ်အနေဖြင့်တစ်ဦးတောက်ပအလှဆင်နှင့်အတူအပိုအသံအတိုးအကျယ်ကို add ပြီးအပြည့်အဝပုံမပါဘဲမစွန့်ပစ်ရပါမည်။
ဂျင်းစကတ် 2018 ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
၏အားသာချက် ဣတ္အဝတ်အစား က၎င်း၏ဘက်စုံ၏မျက်နှာသာအတွက်မိုးပြာရောင်။ တစ်ဂျင်းစကတ် 2018 နှင့်အတူအစပိုင်းမှာဖက်ရှင်ပုံတွေကိုနေ့စဉ်မြို့ပြစတိုင်တင်ပြနေကြပါတယ်။ လက်ျာမော်ဒယ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအသေးစိတျကိုရှေးခယျြရသောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, သငျသညျအဆင်းလှဣတ္လေးနှင့်ပင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုပါစို့ - စကတ် 2018 ပုံရိပ်ကိုဒင်ဗာမြို့မှ:
Kezhualny စတိုင်။ မြို့ပြလေးတို့သည်အဘို့လုံးဝအက်ဆစ်ရေဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူမည်သည့်မော်ဒယ်, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်စုတ်, ဖွာ, fit ။ စတိုင်ထို့အပြင်သည် T-ရှပ်အင်္ကျီတိုထိပ်, svitshoty နှင့်, အင်္ကျီဖိနပ်ပြိုင်ကားဆန်သောစတိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ရိုမန်းတစ်သက်တံ့။ ဣတ္လေးများအတွက်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပျံမှာရင်ခုန်စရာပိုကောင်းရပ်နားအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်အများဆုံးအရှည်ကြောင်းလှပါတယ်။ ruffles, ပွင့်လင်းနောက်ကျောသို့မဟုတ်ပခုံးနှင့်အတူအံ့မခန်းအင်္ကျီ၏ပြီးပြည့်စုံပေါင်းစပ်, ဒေါက်ဖိနပ်နှင့်အတူလှပသောဖိနပ်, စတိုင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း။
တင်းကျပ်သောပုံရိပ်တွေ။ သင့်ရဲ့အလုပ်စားဆင်ယင် code ကိုမူဘောင်အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်မပါရှိဘူးဆိုရင်, ဖြူရှပ်အင်္ကျီတစ်အင်္ကျီနှင့်တစ်ဦးဂန္ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူ Single-ရောင်စုံခဲတံစကတ် ensemble စုံလင်သောဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
အလတ်စားဆံပင် 2015 အမြားဆုံးဖက်ရှင်ဆံပင်ပုံစံတွေ
ဖက်ရှင်ဖိနပ် 2018 - အသစ်ကရာသီ၏နောက်ဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းသစ်ထုတ်ကုန်များ, အရောင်များနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ရဲ Copine - ပြင်သစ်အမှတ်တံဆိပ်ကနေခေတ်သစ်စတိုင်အမျိုးသမီးအဝတ်အစား
ရေကူးဝတ်စုံ 2014 ခုနှစ်အသစ်စုဆောင်းခြင်း
မင်္ဂလာဆောင်ဖက်ရှင် - Trends 2015
ဖက်ရှင် 2018 bangs - အဘယ်အရာကိုဆံပင်နဲ့ Bang ဖက်ရှင်အတွက် 2018 ခုနှစ်?
ဒင်ဗာမြို့မှ Jean - Fall-ဆောင်းရာသီ 2016-2017
နွေရာသီဆင်မြန်း 2014 စုဆောင်းမှု
ချောကလက် - ကောင်းမွန်သောနဲ့လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဖို့အန္တရာယ်
စိတ်ကူးယဉ်မိတ်ဆွေသားသမီးများ၏ 14 ကြောက်မက်ဘွယ်သောပုံပြင်များ
သွေ့ခြောက် apricots, သင်္ဘောသဖန်းသီး, ကျောရိုးဘို့တံစဉ်များကို
Wroclaw - ဆွဲဆောင်မှုများ
အနည်းငယ်မျှသာရဲ့ style အတွက်တိုက်ခန်းများ၏ဒီဇိုင်း
ဒိန်ခဲနှင့် Plum နှင့်အတူ Pie
တူရကီ cutlets လွှာ
အမ်မလီ Ratazhkovski လက်ထပ်